एक नम्बर प्रदेशकाे राजधानी धरान उपयुक्त : अशोक राई – ABC KHABAR
एक नम्बर प्रदेशकाे राजधानी धरान उपयुक्त : अशोक राई
December 18, 2017 ABC Desk राजनीति
धरान । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले प्रदेश नं. १ को राजधानी धरान उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
उनले वर्तमान र भविश्यको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने हो भने धरानलाई प्रादेशिक राजधानी राख्ने विषयमा आनाकानी गर्न नहुने बताए । ‘इतिहासलाई सम्मान गर्ने मात्रै होइन वर्तमान र भविश्यको बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नेहरुले प्रदेशको राजधानी धरानमा राख्न आनाकानी गर्दैनन्, ‘उनले भने, ‘आत्माकेन्द्रित भएर सोच्नेको कुरा अर्कै हो । इतिहासको राजधानी आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ राजधानीको लागि ।’
उनी सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचनमा उठे पनि बाम गठबन्धनका एमाले उम्मेदवार जय राईसँग पराजित भएका हुन् । उनले आफू उम्मेदवार भएर चुनावी प्रचार र अभियानका क्रममा खुलेर धरानलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने विषय बताएका थिएनन् । तर चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि नेता राईले धरानलाई प्रदेश नं. १ को राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
चुनावी अभियानका बेला उनले आफू विगतमा करिब १२ वर्ष धरानमै केन्द्रित रहेर पार्टी संगठनमा काम गरेको बताएका थिए । तत्कालीन पञ्चायत शासनविरुद्ध भूमिगत रुपमा उनले धरानलाई केन्द्रित गरेर लोकतान्त्रिक संघर्ष गरेका थिए ।
भूमिगत कालमा धरानमा रहेर संघर्ष गरेका राई धरानसहित क्षेत्र पर्ने सुनसरी–१ बाट चुनाव लडेका थिए । तर २०४८ सालदेखि नै नेकपा एमालेले जित्दै आएको सो क्षेत्रमा यसपटक पनि एमालेकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । पहिचानको आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आएका राई पराजित भएपछि कतिपय पहिचानवादीहरुमा निराशापन उत्पन्न भएको छ ।
समानुपातिकको अन्तिम मत परिणाम